Dad shacab ah oo ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacayo – Somali Top News
Wararka ka imanaya Magacaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya labo Maleeshiyo, oo maalmihii dambe isku heystay dhul ku yaalla Nawaaxiga Xabsiga weyn ee Waqooyiga Gaalkacyo.
Goob joogayaal la hadlay Mustaqbal Radio ayaa u sheegay in dagaalku dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ,waxaana halkaasi ku geeriyooday inta la xaqiijiyay 5 ruux, halka 4 kalana ay dhaawacmeen.
Xaalada Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan waqooyiga Magaalada ayaa ah mid maanta kacsan,iyadoo wali labadii Maleeshiyo ee Dagaalamay ay wali isku horfadhiyaan goobta ay ku dagaalameen,waxaana mararka qaar lama maqlaya Rasaas goos goos ah oo labada dhinac isku ridayaan waxaana hada ku baxay ciidanka Booliska Puntland.
Wali Saraakiisha Amniga iyo Maamulka Magaalada Gaalkacyo ee Puntland,kama aysan hadlin Dagaalka,waxaana Dadka Shacabka ee ku Nool waqooyiga Gaalkacyo soo wajahay cabsi ku aadan in wax yeelo ay ka soo gaarto Dagaalka.
← Ciidamada Xoogga Dalka oo mushaar la’aan ah 5-tii Bilood ee ugu dambeesay+Sawirro
Kulamadii ugu dambeeyay ee Ra’isul Wasaare Kheyre la qaatay madaxda Jubbaland →
IGAD oo wada hadal u fureysa Dowladda Dhexe iyo maamul Goboleedyada dalka